Wararkii ugu dambeeyay kulamada ka socda Dhuusa Mareeb iyo Ahlusuna oo shuruud ku xiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Odawaa ayaa u soo jeediyay Ahlusuna inay ku soo biiraan nidaamka Federaalka, isla markaana ka mid noqdaan Maamulka Gobollada Dhexe, kana tanaasulaan magaca Ahlusuna.
Mas’uuliyiinta Ahlusuna ayaa wata shuruudo kala duwan, iyagoo marka hore diidanaa inay magaca Ahlusuna ka tanaasulaan oo ay dowladda ku soo biiraan, hadana waxaa jira shuruudo kale oo ay ku doonayaan in qaab awood qeybsi oo kale uga mid noqdaan Maamulka Gobollada Dhexe.
Wariye ku sugan Dhuusa Mareeb ayaa sheegaya in kulamadii xalay la isla gaaray illaa saq dhexe, isla markaana maanta mar kale lagu balansan yahay in la isku soo noqdo, waxaana shuruudaha yaala ka mid ah in Ahlusuna ka baxdo Dhuusa Mareeb, isla markaana gacanta dowladda dib ugu soo laabato.
Wasiir Odawaa ayaa sheegay in Ahlusuna ay door muuqda ka qaadatay nabadeynta iyo la dagaalanka Al-Shabaab deegaanada Gobollada Dhexe, taasna ay qirsan yihiin, hase ahaatee waxaa uu xusay in loo baahan yahay in la qaado tallaab kale oo dhinaca dowladnimada ah sida uu yiri.
“Anaga runtii waxaan aaminsanahay shaqada aad haysaan ay shaqadii Dowladda tahay, magaca un aan isku khilaafsanahay, marka waxaan rabnaa inaan magacii ku heshiino hadafkii weynaayow ummadaan ay laheyd lagu wada gaari karay waa Hooska dowladnimad la wada harsan yahay, aan hooskaas wada qaadano”ayuu yiri C/raxmaan Odawaa oo ka hadlayay kulan ka dhacay Dhuusa Mareeb.
Kulamada ka socda Dhuusa Mareeb ayaa la filayaa inay ka soo baxaan war murtiyeed, marka labada dhinac ku heshiiyaan qodobada wali la isku marin yahay.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii Ahlusuna ay la wareegtay degmada Dhuusa Mareeb, waxaana dowladdu sheegtay in Ahlusuna aanay aheyn, balse garab ka fallaagoobay ay yihiin kooxda qabsatay xarunta gobolka Galgaduud ee Dhuusa Mareeb.